Fikaonandoham-pirenena :: Hangonina ny hevitr’ireo mpanaraka baolina kitra any amin’ny faritra • AoRaha
Hanatanteraka ny teny nomeny Rabekoto Raoul, filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, amin’ny fanaovana ny fikaonandoham-pirenena, amin’ny 28 sy 29 janoary 2020, eny amin’ny Mining Business Center, Ivato.
Hampandroso ny taranja amin’ny alalan’ny fakàna ny hevitry ny tsirairay no tanjona. Hosantarina amin’ ny fakàna ny hevitr’ireo mpanaraka ny taranja any amin’ny faritra ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera misahana an’ izany, amin’ny alatsinainy. Hotetezina i Toamasina, Toliara, Taolagnaro, Fianarantsoa, Antsirabe, Antsiranana ary Mahajanga.
“Tsy manana ny hoenti-manana hahafahana hanatrika ny fikanan-doham-pirenena avokoa ireo olona mipetraka any amin’ny faritra manerana ny Nosy. Handeha any amin’ ny faritra rehetra ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera mandritra ny herinandro. Haka ny hevitr’ireo mpankafy ny baolina kitra amin’ny fampandrosoana ny taranja sy ny tena zava-misy any an-toerana izy ireo”, araka ny fanazavan’i Ranja Mahatovo, sekretera jeneralin’ny Federasiona malagasin’ny taranja baolina kitra.
Hisy ny fifanakalozan-kevitra mivantana miaraka amin’izy ireo sy ny vaomiera isaky ny faritra, hoy hatrany itsy tompon’andraikitra itsy. “Nanangana komity mpaka an-tsoratra ny fidinana any amin’ny faritra sy ireo hevitry ny olona ao amin’ny tambajotran-tserasera izahay”, araka ny fanazavany.
Hoentina amin’ireo andro roa amin’ny fikaonandoham-pirenena ireo hevitra avy any amin’ireo mpanaraka ny taranja any amin’ny faritra ireo. Miisa telopolo amin’ny zato ny mpandray anjara amin’ny fihaonambe eto Antananarivo.
“Hamoaka ny fehin’ny fivoriana ny Federasiona, aorian’ny roa andro nifana-kalozan-kevitra sy ireo vahaolana haroson’ireo olona ao amin’ny tambajotra. Holazaina miandalana eo ny vokatra azo ampandrosoana ny taranja”, araka ny namaranan’ity sekretera jeneraly ity.
Atletisma – Afrika :: Atleta roa no handeha any Togo
Paralympika Analamanga :: Tompondakan’ny fibatana fonjamby ireo atletan’ny Cosaph